Tinder နှငျ့ "ချိန်းတွေ့ပေါကလစ်" Vanity Fair (2015) ၏အရုဏ် - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
မှတ်ချက်များ - ဤဆောင်းပါးသည် Tinder အကြောင်းဖြစ်သော်လည်းညစ်ညမ်းသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအပါအ ၀ င် porn ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏တူညီသောကောက်နုတ်ချက်များကိုကောက်နုတ်ချက်အနည်းငယ်ကဖော်ပြသည်။
မိုးရွာချခက်လာ, သူတို့တစ်အိပ်ရာရှိပါတယ်ထားတဲ့ဧည့်ခန်း, တစ်ဦးကကော်ဖီစားပွဲအတွင်းမှရွှေ့နှင့်ချည်နှောင်-ဆိုးသောရောင်စုံနေရာတိုင်း။ အဆိုပါဟောပြောပွဲသို့တဖန်လိင်မှလှည့်:
"ယောက်ျားတွေတစ်တွေအများကြီးကြောင်းဦးစီးဌာနချို့တဲ့ရသောအမှုသည်နေကြတယ်" ဟု Courtney တစ်ဦးသက်ပြင်းချနှင့်အတူကပြောပါတယ်။ "ကဲ့သို့အမှန်တကယ်အော်ဂဇင်ကဘာလဲ? ငါသိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ "
"ကျွန်မကိုယ့်ကိုကိုယ်မှတဦးတည်းပေးဖို့ဘယ်လိုသိ" Courtney ကပြောပါတယ်။
"အင်း, ဒါပေမယ့်ယောက်ျားဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး" ဟုဂျက်စီကာ, စာသားကပြောပါတယ်။
"[တဲ့ vibrator] မရှိရင်ငါတဦးတည်းရှိသည်မဟုတ်နိုင်ပါတယ်" လို့ Courtney ကပြောပါတယ်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်အတူ "ဒါဟာဖြစ်ပျက်ဘယ်တော့မှရဲ့" ။ "ဒါဟာကြီးမားတဲ့ပြဿနာပါပဲ။ "
"ဒါဟာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်" ဟုဂျက်စီကာ concurs ။
သူတို့ကသူတို့ရဲ့ hookups သူတို့ရဲ့စိုက်ထူဆုံးရှုံးဖို့အတှကျကအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆို။ ဒါဟာလုပ်ငန်းများ၌အစားအစာများတွင်ဓာတုပစ္စည်းများထံမှ hookup လိင်အတွက်နွေးထွေးမှုမရှိခြင်းမှအရာအားလုံးကိုမှစွပ်စွဲထားပြီးတဲ့စပ်စုဆေးဘက်ဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်ဆန်းလူငယ်အမျိုးသားများအတွက်တိုးမြှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, မယ့်.
"ယောက်ျားတစ်ယောက်ခက်ခဲမရနိုင်လျှင် "ရေဗက္ကာကပြောပါတယ်" နှင့်ငါဆိုသည်ကားရန်ရှိသည်, အကြောင်း, အများကြီးဖြစ်ပျက် ဒါကြောင့်ကမ္ဘာ၏အဆုံးဖွင့်နဲ့တူသူတို့ပဲပြုမူ။ "
"နံနက်ယံ၌လေးယောက်မှာဒီကောင်လေးဒါစိတ်ဆိုးခဲ့, ငါ Dude ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည်, ကိုယ့် fuck ဆိုတဲ့ကိုသွားပါလိမ့်မယ်အိပ်ပျော်ခြင်း-က OK ကိုဖွင့်," စာရာ 21, အရှည်လျား curly မှောင်မိုက်ဆံပင်နှင့်အတူတစျခုကပြောပါတယ်။ "ကျွန်မကိုအတု၏အမှန်တကယ်ပင်ပန်းရ။ "
မျိုးစုံလေ့လာမှုများအရအမျိုးသမီးများသည် uncommitted တွေ့ဆုံထက်ဆက်ဆံရေးများ၏အခြေအနေတွင် orgasm ရှိသည်ဖို့ကပိုများပါတယ်။ အဆိုပါ Kinsey Institute နှငျ့ Binghamton တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများပြုလေ့လာမှုတစ်ခုအရသိရသည်နှစ်ကြိမ်အဖြစ်ဖွယ်ရှိထက်ပို။
"ငါအားလျော့ Dick ငါ့ကိုမှာကြွလာသည်ကိုမြင်ရသည့်အခါကိုယ့်အိုးအကြှနျုပျ၏ဘုရားသခငျကဲ့သို့ပေါ့"Courtney တစ်သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ချွတ်ဖုိ့လျှင်အဖြစ်တစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်၏လက္ခဏာသက်သေရှိသူမ၏လက်ချောင်းချပြီးပြောပါတယ်။
"ကျွန်မယောက်ျား porn မှတစ်ဆင့်လိင်များ၏လက်တွေ့ဘဝတစ်ခု skewed အမြင်ရှိထင်"ဂျက်စီကာသူမ၏ဖုန်းမှထကြည့်လို့ဆိုပါတယ်။ "တစ်ခါတစ်ရံသောကြောင့်ငါ porn လိင်အမြဲအကြီးကဲ့သို့တစ်စုံတစ်ယောက် pounding မဟုတ်ပါဘူးထင်ပါတယ်။ " သူမဟာဒေါသရှာဖွေနေ, သူမ၏လက်နှင့်အတူတစ်ပေါင်ရွေ့လျားမှုစေသည်။
"ကနှိပ်စက်တာနဲ့တူအင်း, ကကြည့်," ဒန်ယဲလ်ကပြောပါတယ်။
"သူတို့ရဲ့ဆံပင်ရှိခြင်းတူသောဆွဲထုတ်သို့မဟုတ်ဆို့ခံနေရသို့မဟုတ်ဆော, ပျော်စရာကဲ့သို့ညစ်ညမ်းလိင်လိုပဲ "ဂျက်စီကာကပြောပါတယ်," အဲဒီအမျိုးသမီးတွေ-အကြောင်း, မဟုတ်ဘူး။ ငါသည်သင်တို့သို့ရောက်နေသမျှဆိုလိုပေမယ့်ယောက်ျားပဲ 'ငါဂုဏ်နသူမ၏ fuck ဆိုတဲ့ပေါ့' ' "-bro voice-" ထင်နှင့်တစ်ခါတစ်ရံကြီးမဟုတ်ဘူး။ "
"အင်း" ဒန်ယဲလ်သဘောတူ။ "နောက်ဆုံးညဥ့်လိုပဲကျွန်မဒီကောင်လေးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်, ငါနောက်ဆုံးညဥ့်ကူးသို့ရောက်လာသောမှာအားလုံးနှင့်ရန်လိုမအလွန်လကျအောကျခံတူသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး-, ဒီကောင်လေးပေါ့, သူကငါ့ကိုနာကျင်ခဲ့သည်။ "